डा. तिलक रावल | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय डा. तिलक रावल
डा. तिलक रावल २००६ सालमा अछाम जिल्लाको ओलीगाँउमा जन्मिएका हुन् । ढाका विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका रावलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरबाट एमएका साथै फिलिपिन्स विश्वविद्यालयबाट एमएस गरेका छन् । डा. रावलले कृषिविकास बैङ्कको महाप्रबन्धक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको कार्यकारी अध्यक्ष भएर लामो समय काम गरिसकेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्क गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका डा. रावलले विश्व बैङ्क, एशियाली विकास बैङ्क, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, ओईसीडी, एफएओलगायतमा परामर्शदाताका रूपमा पनि काम गरिसकेका छन् । हाल उनी सभासद् छन् ।
नाजुक आर्थिक अवस्थाका कारक तत्त्व
देशको आर्थिक अवस्था अत्यन्त नाजुक स्थितिमा छ । केही वर्षअघिदेखि नै आर्थिक अवस्था दयनीय छ, यो कसैबाट छिपेको छैन । विगत लामो समयदेखि (जेठ २०६५ देखि) मुद्रास्फीति दुई अङ्कको रही आएको छ। भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति लामो समयसम्म नकारात्मक छ । चालू आर्थिक वर्षमा ४ दशमलव ५ प्रतिशतको मध्यम आर्थिक वृद्धिदर पनि हासिल नहुने निश्चित छ । बजेट र मौद्रिक नीतिमा उल्लेख मुद्रास्फीति, भुक्तानी सन्तुलनको स्थितिबारेका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्ने सम्भावना नै छैन । अझ डरलाग्दो कुरा त के छ भने सम्बन्धित अधिकारीहरुले नकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख यी सूचाकाङ्कहरुको वेगलाई रोक्नसम्म सकेका छैनन् । आयात-निर्यात अनुपात मात्र १६ प्रतिशत छ भने यो अर्थतन्त्रलाई थेकथाम गरिराखेको भनिने विप्रेषणको वृद्धिदर पनि घट्दो छ ।
त्यस्तै स्थिति छ विदेशी मुद्रा सञ्चितिको पनि । हाम्रो कुल निर्यात आर्जनले पेट्रोलियम पदार्थको आयात धान्न नसक्ने स्थिति देखापरेको छ । विश्वबजार र आन्तरिक बजारमा पेट्रोलियमको मूल्य बढिरहेको परि्रेक्ष्यमा हाम्रो आर्थिक अवस्था सुध्रिने लक्षण देखिँदैन । आपूर्ति व्यवस्था डामाडोल छ । इन्धनको उच्च मूल्यले पिल्सिएका उपभोक्ता जेठमा राम्रो वर्षा भएकाले रातमा अँध्यारोमा नै बाँच्नु परेको छैन । तर, धारामा पानी अझै आउँदैन । आर्थिक वर्ष२०६८/६९ को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनमा वाचन गर्न पाएका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीले तीनखम्बे व्यवस्थाको कुरा गरे पनि उनको वाचनलाई मात्र एउटा औपचारिकता निर्वाह गर्ने गन्थनका रुपमा अधिकांशले लिएका छन् ।
जे होस् सरकारमा आउनासाथ कहिले पूरक त कहिले शीघ्र बजेटका कुरा गर्ने मन्त्रीजीलाई आसारमा पूर्णबजेट ल्याउने स्थिति सृजना भएको छ, उनलाई बधाई तथा शुभकामना । उनको बजेट वाचन सुन्नै पर्ला तर राष्ट्रिय सरकार गठन नभई शान्ति र संविधान सम्भव हुँदैन । यो नहुँदा अहिलेसम्म आवश्यक ध्यान नपुगेका आर्थिक मुद्दा अझै ओझेलमा पर्नेछन् र यसमा सुधार हुने स्थिति रहँदैन भन्ने मेरो व्यक्तिगत र हाम्रो पार्टीहरुको धारणा कायमै छ ।
कृषिक्षेत्र अत्यन्तै अनुत्पादक छ । यस देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान करीब ३० प्रतिशतमात्र छ । मधेशमा सिँचाइ र मलखादमा अनुदान दिए हामी खाद्यान्नमा सहजै आत्मनिर्भर हुन सक्छौं, केही निर्यातसमेत गर्न सकौंला । देश हाँक्नेहरुले के बुझ्नुपर्यो भने आपूर्ति व्यवधान नरहँदाको अवस्थामा अनुदानले राम्रै गर्छ । विश्व बैङ्कले यो भन्ला वा त्यो भन्यो भनेर झस्किनु पर्दैन । ठूलो अनुदान प्राप्त भारतको कृषिसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्थिति नै छैन । केही वर्षअघिसम्म सीमाका नेपाली भारतीय बजारमा दन्तमञ्जन, साबुन, ब्रस र भित्री लुगा किन्न मात्र जान्थे ।
तर, अहिले पिठो तथा चामलका लागि पनि जान थालेका छन् । बर्दियाको जमीनको अनाज खानेबाहेक हरेक नेपालगञ्जवासीले रूपैडिहा (भारत)बाट अनाज किनेर खाइरहेका छन् । यस्तो दिन पनि आउन सक्छ- उत्पादन लागत ज्यादै बढी भएपछि किसानले बर्दियामा अन्न उत्पादन गर्न छोडून् र ऋण गरेर भए पनि भारतको सस्तो अनाज किनेर खाऊन् । हाम्रो लक्ष्य स्वदेशी कृषि उपजले सम्पूर्ण जनतालाई खुवाउन सक्ने स्थितिमा पुर्याउने हुनुपर्छ । हामीले भन्ने गरेका छौं- पानी र पर्यटनले देशलाई धनी बनाउन सक्छ ।